Oniversiten’Antananarivo : hitokona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny Seces | NewsMada
Oniversiten’Antananarivo : hitokona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny Seces
Tsy nahazo valin-teny mazava sy matotra avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny mpampianatra mpikaroka mpikambana ao amin’ny Seces Antananarivo, momba ny fitakiana roa sosona.
Vokany, mihatra manomboka omaly ny fampiatoana ny asa fampianarana sy fikarohana rehetra eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy amin’ny sampam-pikarohana miorina eto Antananarivo mandra-pivalin’ny fangatahana rehetra, araka ny fanambaran’ny filohan’ny Seces sampana Antananarivo, Ravelonirina Grégoire Sammy, teny Ankatso, omaly.
Nitaky ny fandoavana ny karama momba ny fikarohana ho an’ireo mpampianatra mpikaroka efa misotro ronono nefa mbola manohy ny fikarohana ny mpampianatra. Faharoa ny mikasika ny “obligation de service” izay nampiakarina ho 200 ora indray nefa tsy neken’ny mpampianatra ny fampiharana izany nanomboka ny taona 2005 no ho mankaty. Nahantona aloha io lalàna io ka notazonina ny 125 ora mahazatra hatramin’izay. Gaga anefa ny mpampianatra nahita ny taratasy nataon’ny mpitantana ny raharaham-bola ao amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony fa naverina manan-kery indray ilay lalàna nolavin’ny mpampianatra hatramin’ny taona 2005. Tsy nampahafantarina mialoha ny fanovana ny mpampianatra voakasika ka sorena tamin’izany. Lasa misy fiantraikany amin’ny fandoavana ny saran’ny ora fanampiny ny fampitomboana ny “obligation de service” isaky ny mpampianatra ho 200 ora fa tsy 125 ora, hoy ny fanazavana ihany.
Manana zo hitokona ny mpampianatra mpikaroka
Mamaly ny minisitra tomponandraikitra izay nilaza fa tsy ho tokony hanambara fitokonana ny Seces sampana Antananarivo, fa anjaran’ny birao nasionaly no manao izany ny filohan’ny Seces Antananarivo. Nanamafy izy fa manana zo hitokona araka ny voafaritry ny lalàna manan-kery momba ny asa sy ny fitsipika anatiny mifehy ny sendikà izy ireo.
Teny am-pamaranana, nilaza izy fa handefa taratasy ho an’ny filoha momba izao fitakiana izao hahafahany mitondra vahaolana.